Hanoratra tatitra vaovao
Ampidiro ny anaran’ny rafi-pikambanana
Hanjohy tatitra efa misy
Manome laharana mena tsy fantatra anarana sy tsiambaratelo ho an’ny rafi-pikambanana maneran-tany.
Ny tanjon’ny NAVEX Global dia manao izay ahafahanao mampahafantatra olana na ahiahy mifandraika amina fitsipi-pitondrantena tsy mendrika na tsifanarahan-dalàna, amin’ny fomba azo antoka sy amim-pahitsiana, amin’ny fitantanana ny orinasa na ny filankevim-pandrindrana ao anatin’ny tsiambaratelo sy tsy fahafantarana anarana.
NAVEX Global dia voamarina “Safe Harbor” tamin’ny alalan’ny United States Department of Commerce fa mpamatsy laharana mena manana fepetram-piarovana mipetraka hisahanana ny fiarovana ny momba ny tena manokana ao amin’ny Vondrona Eoropeana sy torolalana maneran-tany hafa mikasika ny fiarovana ny momba ny tena manokana.
Miezaka mafy izahay mba ho tsotra sy mora ampiasaina arak’izay azo atao ny fanaovan-tatitra ny olana sy ny ahiahy amin’ny alalan’ny EthicsPoint™. Ireto vohikala manaraka ireto dia hanoro lalana anao ao anatin’ny fanaovana azy sady hanampy amin’ny fihazonana ny tsiambaratelonao sy ny tsifahafantarana anao amin’ny dingana rehetra. Araho ireto dingana ireto hametrahanao ny tatitrao :
Ampidiro ny anaran’ny rafi-pikambanana andefasanao tatitra ary fanteno ny safidy mety
Kitiho izay Sokajim-pandikana mahalaza indrindra ny olana taterinao
Ekeo ny “Famarafara” ary fenoy ny lasi-taratasy
Alohan’ny handefasanao ny tatitra dia mamoròna tenimiafina hahafahanao manjohy ilay tatitrao.
Rehefa lasa ny tatitrao dia homena famoha tatitra ianao. Ny tenimiafina sy ny famoha tatitra dia hahafahanao manjohy ilay tatitrao.